Ogaysiis ku socda dhamaan taagerayaasha xisbiga waddani iyo shacab-weynaha reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan HOLLAND.
Friday June 16, 2017 - 09:57:58 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Waxa loogu bishaaraynayaa dhamaan taagerayaasha xisbiga Waddani iyo shacab-weynaha reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan HOLLAND in maalinta sabtida
Waxa loogu bishaaraynayaa dhamaan taagerayaasha xisbiga Waddani iyo shacab-weynaha reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan HOLLAND in maalinta sabtida ah ee bishu tahay8 July 2017, magaalada Den Haag. Lagu qaban doono xaflad si weyn loo soo agaasimay.
Xafladan oo loogu talagalay xuska sanadguuradii kqwad ee asaaska laanta xisbiga Waddani ee Holland in dardargalinta ama u diyaargarawga doorashada madaxtinimada ee 13 November 2017 ka qabsoomi doonta dalkii insha allaah.
Dhinaca madadaalada waxa xaflada kuugu diyaara fananiin waaweyn oo halkaas kuugu soo bandhigi doona heeso waddani iyo madadaalo ah labadaba.
Xusid : "Goobta xaflada waxaad ka helaysaa cunto fudud iyo cabitaan qiimo jaban ah."
Adres goobta xafladu waa:
Saacada ay bilaabanayso xafladu waa :15:00 T/M 24:00
Faldan wixii faafahin ah nagala soo xidhiida:
Xoghayaha Guud : Maxamed Musa Tel. : 0639090689
Xoghayaha Xidhiidhka Bulshada : Fadumo Musa Tel. : 0687879207
Xubin golaha dhexe : Xuseen Barkhad Tel. : 0684347794
Gudoomiyaha xisbiga Waddani ee dalka HOLLAND.
Md. : Xiis Maxamed Cige.